▷ 🎮 Enweghị okporo ụzọ kwụ ọtọ 【Ntụle na nbudata ✅】 - 【Ntụnyere】 2022
🎮 Na-enweghị ụzọ kwụ ọtọ 【Ntụle ma budata ✅】
Ọ nweghị okporo ụzọ kwụ ọtọ na-arịọ gị ka ị leba anya na ahaghị nhata n'ike nkume na ahụmịhe egwu na-akpali akpali.
Ọ bụ nkume megide EDM na mgbalị iji weta nhatanha na ọkụ eletrik na onye ọ bụla nọ na Vinyl City na ee, ọ bụ kpọmkwem ihe nzuzu dị ka ọ na-ada. Enweghị okporo ụzọ kwụ ọtọ bụ egwuregwu eme ihe dị ọcha punk rock na isi na DNA. Dị ka punk, ọ na-adịchaghị mma mgbe ụfọdụ, ọ bụghịkwa mgbe niile n'ụzọ na-arụ ọrụ maka egwuregwu ahụ. Ọ na-echetara m otu ndị na-adọba ụgbọala nwere nkà na ndị na-ahụ maka ya bụ ndị kwenyere n'ezie na ha nwere ike ime ya, mana ha chọrọ obere nkwado. iji ruo n'elu. Nke ahụ bụ akụkụ nke amara n'agbanyeghị, na enweghị okporo ụzọ kwụ ọtọ nwere ọtụtụ echiche mara mma na egwu mara oke mma iji kwado ha niile.
Na No Straight Roads, ị na-egwu dị ka rock duo Bunk Bed Junction. Ndị otu ahụ nwere onye na-agụ guitarist Mayday na onye ama ama Zuke, onye bi na ọwa mmiri nke Vinyl City ọdịnihu, ebe ọkụ eletrik na-agba na egwu. Ọ dịghị okporo ụzọ kwụ ọtọ (NSR) bụ aha obodo na-achị achị na-achịkwa ike a, ya mere ọ bụkwa egwu egwu, e kpebikwara na EDM bụ eze. May na Zuke chọrọ iweghachi egwu rock n'obodo, ma mgbe a napụrụ ha n'ụzọ na-ezighị ezi na asọmpi nwere ike ịhụ ka ha sonye na NSR, ha na-amalite ikwu maka mgbanwe. Nkwekọrịta ahụ na-emechi mgbe ọ gbasịrị agbachapụ ọzọ n'obodo ahụ ebe ọ bụ naanị nnukwu ndị NSR nwere ike ịnweta ike mberede; ihe niile ha na-eme bụ ịtụba EDM gigs na-arịa ọrịa. Ya mere, Bunk Bed Junction na-ekpebi iwepụta ndị na-ese ihe ise NSR kacha elu n'ọgụ egwu iji rịgoro n'elu wee weghachi ọkụ eletrik na nha egwu egwu na ọha mmadụ.
Njem a chọrọ ịnyagharị ụwa nke mebere Vinyl City. N'ebe a, ọ na-achịkọta tubes nke qwasa, ọkụ eletrik nke ụwa a na-agba, ma na-emefu ha ọkụ ọkụ na ngwá electronic ndị ọzọ na mpaghara ahụ. Ime nke a na-enye gị ọnụ ọgụgụ dị nta nke Fans oge ọ bụla, nke bụ ego ị nwere ike iji kwalite osisi nkà gị na ịzụta nkà ọhụrụ. Ị ga-ahụkwa akwụkwọ mmado ndị na-eme ihe n'ime ngwa mbibi gị. Oge okirikiri a na-amalite dị ka ihe na-atọ ụtọ nke na-akwado nyocha, ọkachasị ebe ọ na-abịa tupu ihe ọ bụla ọzọ, mana ọ na-adalata mgbe ị chọpụtara na qwasa karịrị akarị ka ị tụrụ anya iji, ọ bụghị. Ọ dịghị ọtụtụ ihe ime. idozi, na ụzọ ndị ọzọ bara uru iji nweta mmelite ga-ekpughe ma emechaa. N'ihi ya, obodo bụ njedebe zuru oke iji nwee mmetụta dị nta na kọmpat, n'agbanyeghị na o yiri ka ọ ga-enwe ike ịhụ ndị mba ọzọ na ihe ndị ọzọ na-ewu n'ụwa, yana njedebe nke bụ n'ikpeazụ Summer.
Na njedebe nke mpaghara ọ bụla, ị na-ama onye na-ese NSR na-esote aka imeghe mpaghara na-esote. A na-ekewa ọgụ ndị a ụzọ abụọ: mgbado anya na onye isi na-alụ ọgụ megide onye na-ese ihe. The Approach bụ usoro nke obere usoro ikpo okwu 3D nke ị na-ewepụ ndị iro, na-aga n'ihu na ọkwa nchekwa dị iche iche ruo mgbe ị ruru onye isi. Njegharị ahụ na-ama jijiji nke ukwuu, nke na-arụ ọrụ nke ọma maka ọgụ na ịzere mwakpo, mana na-eme ihe omume ikpo okwu dị ka ịwụ elu oghere na ọdịda na obere mpaghara nke siri ike karị. Ọ nwekwara ike isi ike ikpebi omimi nke egwuregwu a, ọkachasị mgbe a na-egwu ya na ụdị mgbanwe mgbanwe eserese. Nke a na-emetụta ọ bụghị naanị ikpo okwu, kamakwa ọgụ - ikpe ikpe dị anya na onye iro nwere ike ịghọ aghụghọ. Ọ bụ ihe m mere ka ọ dịkwuo mma mgbe m na-egwu egwu, achọpụtara m na ọ dị mfe na PC na nkọwa dị elu na onyinyo agwa, ma a ka nwere oge ụfọdụ na-akụda mmụọ ebe ihe na-abụghị ihe m tụrụ anya ya.
Agha na-ewere ọnọdụ ozugbo na ndị iro, gụnyere ndị isi, na-awakpo mgbe niile na egwu egwu, mana ọ bụghị mgbe niile n'otu ụzọ ahụ. Enwere klaasị dị iche iche nke rọbọt NSR, dịka ọmụmaatụ, na-amali ma mebie gburugburu gị. Ụfọdụ ga-amali ọtụtụ ugboro n'ahịrị karịa ndị ọzọ, ndị ọzọ na-apụ n'oge. Ọ ga-adaberekwa na egwu ahụ n'onwe ya. Ọzịza nke ukwe na-abata nwere ike igosi ọgụ dị iche iche sitere n'aka onye isi; ị na-amụta Dodge kwaa ma ọ bụ ịhụ ụfọdụ ọgụ n'oge ụfọdụ akụkụ nke kwekọrọ ekwekọ songs. Ọ na-ejedebe na-enwe mmetụta dị mma mgbe ọ na-arụ ọrụ nke ọma, dịka ị nwere ụdị uche nke isii n'ihi na ị na-egwu egwu. Ị na-amalitekwa ijikọ akụkụ nke egwu ahụ na mmegharị ndị ị na-eme iji dị ndụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ dị gị ka ịgba egwu karịa agha egwuregwu vidiyo.
Mayday na Zuke na-egwu egwu dị iche iche, ebe May nwere mwakpo melee dị arọ yana Zuke na-elekwasị anya na combos ngwa ngwa, nke kachasị mma ịmekọrịta na egwu ahụ. Ha nwekwara mmegharị pụrụ iche dị iche iche ị nwere ike imeghe ma kwado, nke nwere ike ịgwọ gị, mebie mmebi dị iche iche, ma ọ bụ nye gị uru ọzọ. Inwe ike ịhọrọ na gbanwee ibu a kwa agha na-enye gị ọtụtụ njikwa na atụmatụ dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ndị isi nwere ike ịnọpụ n'ebe dị anya ma chọọ ọgụ dị iche iche, yabụ ịkwado agwa iji jiri ha mee ihe na-enye usoro aghụghọ maka ọgụ.
Mgbe ị na-egwu solo, ị nwere ike ịgbanwe n'etiti mkpụrụedemede abụọ ahụ site na ịpị bọtịnụ ka iji nke kacha mma, ma ọ bụ nwee ọ enjoyụ n'ịkwakọba ihe n'ihe ndina ma mee ka enyi gị rụọ ọrụ nke ọzọ. Aghọtaghị m otú ụdị egwuregwu ha si dị iche ruo mgbe mụ na onye mụ na ya na-arụkọ ọrụ tụlere ụzọ kacha mma isi merie onye isi, na-achọpụta na anyị na-agbalị imeju àgwà onye ọ bụla.
Nke a pụtara ìhè karị mgbe ọ na-egwu naanị ya. Anọ m na-atụ anya ịrapara na Mee, mana ahụtara m onwe m na-anụ ụtọ n'etiti itinye mmiri. Nke kacha mkpa bụ na m ga-amụgharị ka e si egwu solo. Omume ọ bụla ị na-ejighị agaghị eme nke ukwuu, nke pụtara na ị ga-eme obere mmebi mgbe ị na-egwu naanị ya. Ha na-enwetaghachi ahụike na ume maka mmegharị pụrụ iche n'agbanyeghị, yabụ enwere atụmatụ dị iche - agha nwere ike ịdị ogologo, mana ọ na-adị gị ka ị na-achịkwa ha, ịzụ ahịa maka ikpe kachasị mma, ojiji, na ịlanarị.
Ịkpọ otu solo pụtakwara na nsogbu igwefoto na-abịa na ngalaba-op adịghị emetụta gị. Igwefoto ọkpụkpọ abụọ mere ka m bụrụ ọnụ: mgbe a na-egwu egwu na Switch, nchikota anya anya site na ihuenyo na mkpebi dị ala nwere ike ime ka okwu omimi niile a kpọtụrụ aha n'elu ka njọ. Na gburugburu ụwa, ọ bụ naanị onye ọkpụkpọ bụ isi nwere ike ijikwa igwefoto ahụ, yabụ na ọ na-arụ ọrụ naanị ma ọ bụrụ na otu ọkpụkpọ na-agafe obodo ebe nke ọzọ na-enye ohere ka egwuregwu ahụ na-aga n'ihu n'etiti mpaghara. Ọ kacha mma n'oge ọkwa dịka igwefoto edobere ma na-agbanwekarị ka ọ dabara na ndị egwuregwu abụọ ahụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na igwefoto dị na njedebe ya, ọ na-eme ka omume ahụ sie ike nyochaa ma na-eduga ndị na-egwu egwuregwu n'ihu n'ọhịa nke echiche na mgbe mgbe n'ihe ize ndụ. Mgbe ụfọdụ njikwa anyị ga-akwụsịtụ ma kwụsị ịrụkọ ọrụ ọnụ, ebe nke a na-emekwa n'ụdị ọkpụkpọ otu, ọ na-apụta ìhè karịa mgbe mmadụ abụọ metụtara. Mụ na onye mụ na ya na-emekọ ihe ka jisiri ike na-egwu egwuregwu niile ọnụ, mana ọ bụghị n'enweghị nkụda mmụọ, ọ na-ewekwa ngwa ngwa ugboro abụọ ogologo egwuregwu solo m n'ihi nke ahụ.
Nke ahụ kwuru, enwere ụfọdụ ọkwa pụrụ iche na iche echiche, ọkachasị ndị isi. Onye isi ọ bụla nwere ụdị nke ha na sub-genre nke EDM. Otu ga-eme ka ị gbanarị ọtụtụ projectiles dijitalụ n'ime ụwa dị n'okpuru mmiri mebere megide arụsị dijitalụ Cutecore. Ebe ọzọ ị na iju mirror ụwa nke a surreal artist na miri Psydub synths ebe ọ Pop na na nke kewara akụkụ n'etiti May na Zuke. A na-atụ m egwu maka ihe ọhụrụ niile, dị egwu, na ihe magburu onwe ya Ọ dịghị okporo ụzọ kwụ ọtọ ga-abụrịrị na ọ tụbara m, mana akụkụ kacha mma ka bụ egwu.
N'oge ọkwa, ị ga-ahụ otu mita n'etiti nkume na EDM n'etiti etiti ihuenyo gị. Usoro ọ bụla ị na-agafe ga-eme ka ọ gbanwee wee laghachi na EDM maka oge ọzọ, ma ihe kpatara ya ji dị mma bụ na egwu na-egosipụta mgbanwe ahụ. Egwu EDM ka dị oke ịtụnanya, mana iwebata ihe egwu dị arọ na guitar na drum ka mita na-abawanye na-enwe mmetụta dị ike. Otu n'ime ihe nkiri kachasị amasị m na-amalite site na piano recital nke nwa okorobịa na-eto eto virtuoso nke ị na-ejikọta na "Anyị bụ ndị ajọ mmadụ?" oge. Ngwa eletrọnịkị agwakọtara ya na abụ abụ piano mara mma adịlarị mma, mana ịnụ ka okwute na-abanye na ya mere ka ọ ka mma. Ị nwere ike ịnụ onwe gị na-emeri ka egwu na-esiwanye ike na ụda ụda ndị ọzọ. Ọ na-eme ka ọ dị gị ka ị na-eji ike egwu egwu n'ezie ma nwee ike ịgbanwe ikuku gburugburu gị. Ọ na-awụ akpata oyi n'ahụ.
Enweghị okporo ụzọ kwụ ọtọ na-enwe mmetụta kachasị mma mgbe ị nwere ike ịdabere na ọdịdị egwu ya, mana igwu egwu anaghị eme ka ọ dị mfe mgbe niile. Mmekọrịta m na enweghị okporo ụzọ kwụ ọtọ agbanweela dabere na arụmọrụ m. Mgbe ị na-eme ya na-ezighị ezi, ọ dị egwu, n'ihi na ihe nwere ike ito ngwa ngwa site na mmetụta nke ịda mbà n'obi, na-ewere nnukwu ihe ọkụkụ, na izute mmejọ na-akụda mmụọ. Mgbe ị dị mma, ọ na-adọrọ mmasị kpamkpam. Ị na-enwe mmetụta onye nwere egwu, na-ege ya ntị, na-emeghachi omume ma na-agbanwe ya. Ọkachamma, emere m egwuregwu ahụ dị ka ọba egwu: ekweisi na, onye njikwa n'aka, na imikpu kpamkpam na egwu ahụ. Ugbu a m dị ezigbo mma, nke a dị ka nnukwu egwuregwu nnọkọ nke m nwere ike ịnweta n'ihe dị ka awa atọ ruo anọ, ma ọ bụ họrọ egwu dị mfe igwu egwu iji nwaa ma nwee akara dị elu. Nke a dị nnọọ iche na faịlụ nchekwa elekere 18 mbụ m jupụtara na glitches ọtụtụ na ọrụ na-adịghị mkpa.
Ma n'agbanyeghị na akụkọ ahụ dị njọ na nzuzu, ọ ka nwere obi. The Rock Rebellion Ride nwere ụfọdụ ezigbo nkuzi ịkọrọ, na ihe mere ndị mmadụ ji hụ egwu n'anya, ihe na-akpali mmasị ha, na ma ihe ndị ahụ ọ dị mma ma ọ bụ na ọ bụghị. Nke a bụ nnukwu ọrụ olu na-akwado ya. Olu May juputara na ndụ na ọkụ, ebe Zuke nwere ndidi zuru oke ...
Download Enweghị ụzọ kwụ ọtọ
Cecotec Cecofry dị mkpa ngwa ngwa ọnwa na-enweghị mmanụ fryer 2,5L ikuku na-ekpo ọkụ. 1200 W, nri, ...
Fryer imewe mara mma na kọmpat nwere onye na-ahọrọ iji jikwaa ọrụ.